Saddex qof oo loo qab qabtey qarax ka dhacay magaalada Kismayo – SBC
Saddex qof oo loo qab qabtey qarax ka dhacay magaalada Kismayo
Posted by editor on March 20, 2008 Comments
Maamamulka Gobolka Jubada Hoose ayaa waxay xabsiga u taxaabeen Saddex qof ku waas oo lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen Qarax dhawaantaan ka dhacay magaalada Kismayo kaas oo lagu bar tilmaameed saday Shaqaale Hay´adda MSF u shaqaynayey.
Maamulka ayaa saddexda qof waxaa ay ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen qarax lala bar tilmaameedsaday Hay adda MSF afhayeen u hadlay maamulka gobolka ayaa waxaa uu sheegay in ay ku wadaan baaritaanno saddexdan qof ee gacanta lagu soo dhigay.
Dhinaca kale maamulka gobolka ayaa waxaa uu sheegay inay si aad u dhaleecaynayaan falkaas isaga oo xusay inuu ahaa mid argagaxisnimo ”Waxaan si aad ah uga soo horjeednaa cid kasta oo ka dambaysay falkaas argagixisnimada ah iyo cid kasta oo ka dambeysey weerarkaas” ayuu yiri Axmed Cali oo ku hadlayey magaca maamulka Gobolka.
Dhinaca kalena Caaqil Cabdullahi oo ku hadlay afka mid ka mid ah beelaha ku dhaqan gobollada Jubbooyinka ayaa sheegay inuu ka soo horjeestay xariga loo gaystay saddexdan qof isaga oo sheegay in lagu bar tilmaameedsaday laguna faquuqay beel ka mid ah beelaha dega gobolka Jubada Hoose.
Waxaa sidoo kale soconayo baaritaanno iyo jidgooyin ay sammaynayaan maamulka Degmada iyo kan Gobolka ee dhaq dhaqaaqa uu hoggaamiyo Xildhibaan Barre Aadan Shire isaga oo sidoo kale maamulka si toos ah ay u caddeeyeen in hawl galladooda y ugu raad joogaan dadkii ka dambeeyeey weerarkii lagu bartilmaamayd saday kooxda MSF.
Dhawaan ayeey ahayd markii qarax nooca rumuudka laga hago loo dhigay Gaari ay la socdeen shaqaalo ka tirsan Ururka MSF kaas oo ay ku dhinteen 4 ka tirsan shaqaale Sar sare oo ka tirsan hay adda MSF, iyada oo sidoo kale ay ku dhaawacmeen tiro intaas ka badan.
Mohamed Ali Hersi(Dalmar)
SBC International Kismayo.